Uyifumana njani iNkulumbuso? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Njengoko kufanele ukuba sele uyazi, iTwitch liqonga elivumela usasazo oluphezulu kakhulu, abantu abaninzi bayisebenzisa ukuze abasebenzisi bonwabe imixholo eyahlukeneyo enomdla, njengokupheka, umculo okanye eyona nto ifunwayo kwimidlalo yevidiyo. Ukuba lilungu loluntu lweTwitch kwi-intanethi, awunyanzelekanga ukuba unikele ngemali kuyo nantoni na.
Kodwa kukho ukhetho olubizwa ngokuba yi "Twitch prime", luguqulelo lwenkonzo yobhaliso, apho abantu abaqeshayo bafumana izibonelelo ezithile ezinomdla, Ngokungafaniyo nabasebenzisi abaqhelekileyo. Kule nqaku, indlela enokufezekiswa ngayo iya kuchazwa, kunye nezinye izinto kunye neenzuzo zokufumana le nguqulo yeTwitch.
Ngoku kuqhelekile ukuba iinkonzo ezahlukeneyo ze-intanethi zibe neenguqulelo ezimbini, enye isimahla kwaye enye ihlawulwe, njengoko kunjalo umzekelo kwiYouTube, spotify, ccleanner, njl. Oku kusebenza ukuze abasebenzisi be-Intanethi bakwazi ukujonga inkonzo simahla kwaye emva koko uthathe isigqibo sokuba uyafuna ukuvuna izibonelelo ezipheleleyo zeapp.
Ngokubhekisele ekusebenziseni iTwitch simahla, ufumana ithuba lokuyisebenzisa kwaye wonwabele zonke iintlobo zothumelo ngaphandle kwendleko, Nokuba wenze iakhawunti awudingi kuhlawula nto. Kodwa inkqubo yentlawulo ikhona kukuphucula amava ngaphakathi kweqonga lokusasaza bukhoma.
Ngokukhetha ukusebenzisa olu khetho akusekho malunga neTwitch kodwa iakhawunti iba yinkulumbuso yeAmazon, ivumela abasebenzisi ukuba bafumane izibonelelo ezingapheliyo. Njengokufumana imidlalo embalwa yasimahla ngenyanga, enye into ekufuneka uyigcinile engqondweni yile yokuba ngaphambili Inkonzo ibizwa ngokuba yi "Twitch prime" kwaye ngoku ibizwa ngokuba yi "Prime Gaming".
Le nkonzo ibandakanyiwe kuphela ngokubhalisela i-Amazon prime, xa umntu eseSpain, oko kuthetha ukuba kwanele ukuhlawula zonke iinkonzo zeli qonga ukuze ufumane izibonelelo ezichaziweyo. Kodwa kumatyala abantu abangenazo ezi nkonzo Kukho ukhetho lokufumana isilingo sasimahla senyanga, apho kamva i-euro ezingama-3.99 kufuneka zihlawulwe rhoqo ngenyanga.
Ngale nto, uya kuba nakho ukufikelela kuthotho lwezibonelelo ezinje ngomxholo okhethekileyo, imidlalo yasimahla, ukuhambisa ngokukhawuleza nangokukhululekileyo, ukongeza kwi Imijelo ephilayo engenasiphelo engenamkhawulo kunye nenketho ye "Prime video" Ukongeza, xa ungena kwinkonzo ye-Prime Gaming, iphethe ezinye izibonelelo ezinje:
Ukufikelela kwimixholo ethile ekhethekileyo yomdlalo wevidiyo, ngaphandle kweendleko ezongezelelweyo.
Uthotho lweempawu ezizodwa, igcinelwe kuphela amalungu agciniweyo enkonzo.
Iinketho ezininzi zokwenza ngokwezifiso, njengemibala yengxoxo, phakathi kwezinye izinto.
Ukugcinwa kwezinto ezikhutshwayo ezindala, ezithi zinokujongwa ngeentsuku ezingama-60 eziqhubekayo, ukuqala kumhla wazo wokukhutshwa.
Kukho iindlela zokwenza fumana inkonzo ngaphandle kwentlawulo okwethutyana ngeendlela ezimbini; Eyokuqala kukuqesha iinkonzo zeAmazon Prime, eya kuthi ivelise iakhawunti yeTwitch ngaphandle kwendleko ezongezelelweyo. Indlela yesibini kukuvavanya inkonzo ngeentsuku ezingama-30 zasimahla, unxibelelanisa iakhawunti.
Konke malunga neTwitch Prime